Halkan waxaad ka akhrin kartaa wixi ku saabsan gunada sal-dhigashada iyo sida aad u samaysan karto xisaab bangi marka aad hesho sharciga deganaansho ee Iswiidhan. Halkan waxaa ku jira xitaa macluumaad ku saabsan cashuuraha, xisaabaha, caymisyada iyo noocyada kala duwan ee taageerada dhaqaale.
Si aad u maarayn karto dhaqaalahaga gaarka ah waxaad u baahantahay inaad lahaato xisaab bangi oo hesho adeegyada bangi ee kala duwan.
Halkan waxaa ku jira macluumaad dheeraad ah kuna saabsan bangiyada, xisaab bangi iyo adeegyada bangi ee kala duwan looguna talogalay adigaaga helay sharciga deganaansho ee Iswiidhan.
Deynka alaab guri dhigashada ee laga helo CSN.
Haddii aad dhawaan heshay sharciga deganaansho ee Iswiidhan waxaad fursad u heli kartaa inaad lacag ka amaahato Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda, CSN. Adigu waxaad amaahan kartaa lacag si aad ugu iibsato alaab guri iyo wixi kale ee gurigaaga ah. Tani waxaa lagu magacaabaa deynka alaab guri dhigashada.
Halkan waxaa ku jira macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan deynka alaab guri dhigashada.
In aad maareyso dhaqaalahaaga gudaha Iswiidhan
Waxaa jira macluumaad muhiim u ah inaad ogaato si aad u awoodo maaraynta dhaqaalahaaga gudaha Iswiidhan. Tusaale ahaan sida aad u bixinayso cashuurtaada iyo xisaabaadkaaga ama sida ay u shaqeeyaan caymisyada iyo noocyada kala duwan ee taageero dhaqaale.
Halkan waxaa ku jira macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida aad maaraynayso dhaqaalahaaga gudaha Iswiidhan.